Times24 Nepal » ‘पद, पैसा र परिवार मात्र सोच्ने प्रचण्डलाई देश सुम्पिन सकिन्न’
काठमाडौं। सरकारको नेतृत्वमा रहेका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको असन्तुष्ट समूहका नेताहरू देश र जनताको आवस्यकताविपरित कसैको इशारामा चलिरहेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई आज बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि र विकासका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूमा आफ्नै दलका केही नेता बाधक बनेको आरोप लगाए।
म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी गर्‍यौं । संविधान जारी गरेबापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना गर्‍यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्द्रित गरियो । देश बर्बाद भयो, नसक्ने ठाउँमा सिङ जुधाउन गयो । छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिगार्‍यो…. हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन । हामीले त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौं र त्यसका विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौं । तर, पनि हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौम सत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए । हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले, बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो, अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढंगले बोलेर अभियान थाल्नुभयो । हामी एउटा देशबाट घेरिएका थियौं । चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेपछि त सहिसक्नु नै भएन । तीव्र भयो, हमला । चीनतिरबाट पारवहन र यातायातसम्बन्धी सन्धी भएपछि, चीनतिरका विभिन्न नाकाहरु खोलेपछि, विभिन्न बाटाहरु बनाएपछि, चीनसँग जोड्ने बाटो बनाइयो भनेर हामीमाथि हमला भयो ।
अर्को, हामी चुनावपछि अरू कामहरुलाई बढी व्यवस्थित गर्नु छ । चुनाव अगाडि हामीले कमिटीलाई व्यवस्थित गर्ने र विभागहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, मातहतका कमिटीहरुलाई पुनर्गठन गर्ने यावत कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै कामहरु गरेर हामी चुनावका लागि तयारी गर्छौं । चुनावमा हामीले कम्तीमा ५० लाख लोकप्रिय भोट ल्याउनुपर्नेछ । समानुपातिकमा यति ल्याउनु छ । त्यो ५० लाख भोट हामीले ल्याउनु छ । हामीले दुई पार्टी मिलेर ११६ सिटमा जितेका थियौं । ११६ सिटमा जितेका थियौं भने अहिले त्यसमा ४ सिट थप्नु पर्नेछ । १२० सिट पुग्नुपर्ने छ ।
यस्तो काम सञ्चालन गर्न हामीसँग सशक्त, विचारमा स्पष्ट र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । त्यसर्थ मैले केन्द्रीय कमिटीमा केही साथीहरु थप गरेको छु । आन्दोलन टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको अवस्थाबाट एकता, एकीकरण र पार्टी निर्माणको एउटा अभियान, आन्दोलन सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको नेता, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा । त्यो अध्यक्षको हैसियत हो, जसमाथि जनताले विश्वास गरेर अभिभारा सुम्पिएका छन् र त्यो अभिभारा असफल हुन दिनुभएको छैन । देशभक्ति मनमा नभएका, लोकतान्त्रिक चिन्तन नभएका, देश र जनताबारे कहिल्यै नसोच्ने, आफू, आफ्नो परिवार । खासगरी तीन पद, पैसा र परिवारबारे मात्र सोच्नेहरुको हातमा देश सुम्पिन सकिँदैन । त्यसकारण विघटनमा जानुपर्‍यो ।
अब यसपछिको परिस्थितिको हामीले कसरी सामना गर्ने ? उनीहरुले निहुँ त अगाडिदेखि खोजिरहेकै थिए, अब झन् उनीहरुले निहुँ बनाउँछन् । त्यो निहुँ बनाएर पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् र प्रयास गरिरहेका छन् । परामर्श पनि नगरेर अध्यक्षलाई निष्काशन गर्ने आदि इत्यादि गरिरहेका छन् । महाधिवेशन गर्नुपर्ने, गरिरहेका छैनन् । त्यतापटि्ट लागिराखेका छैनन् । त्यसैले आगामी अभिभाराहरू पूरा गर्न सक्ने गरी कमिटीलाई थपेर विस्तार, अर्को भाषामा भन्ने हो भने पुनर्गठन गरेर विस्तार हो यो । तपाई‌ंहरुले देखिहाल्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको छ, केही आउँदैनन्, उतै बैठक बसेका छन् । यसखालको अराजक स्थितिमा आन्दोलन जोगाउनका लागि को कतापटि्ट बस्छ, छोडिदिऔं हामी । आन्दोलन जोगाउन मैले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य विस्तार गरेको छु ।
अहिले हामी विशेष परिस्थिति, विशेष अभिभारा र विशेष अभियानमा भएको हुनाले हामीले कमिटीलाई अलिकति ठूलो पनि बनाउनुपर्‍यो । एकथरी मान्छेहरू विभाजनका लागि उद्दत छन् । त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्‍यो । विभाजित भएर छुट्टियो नै भने पनि आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्‍यो । तसर्थ ११९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । ४४७ पहिलेको र २०७७ पुस ६ गते मैले प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको बृहत्ततर हितलाई ध्यानमा राखेर मनोयन गरेका ५५६ जना गरेर यतिबेला १००३ जना मौजुद छौं । पहिला पनि कमिटीहरू यसरी नै बनिसकेपछि स्वअनुमोदन गरिएको हो । अहिलेसम्म भएका कमिटीहरू पनि संक्रमणकालीन कमिटी हुन् ।
अहिलेसम्मका रहेका कमिटीहरूका एकीकरणका काम पूरा गरेर दुई वर्षभित्र पार्टी एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर तोकिएको थियो । त्यो कुरा विधानमा पनि उल्लेख छ । जुन अभिभारा पूरा गर्न पहिले रहेको केन्द्रीय कमिटीबाट सम्भव देखिएन । त्यो असथर्मतालाई समर्थ बनाउन त्यही कमिटीलाई गतिशील, एकताबद्ध, संगठित गरेर कुनै हिसाबले पनि सम्भव भएन । अध्यक्षको नाताले मेरो कर्तव्य हो, पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन दिनु भएन । गतिहीन दिनुहुँदैन, आन्दोलनलाई सिद्धिन दिनुभएन । पार्टीलाई ध्वस्त हुन दिनुभएन । त्यसकारण मैले यो सदस्यहरू थपेको छु ।
भइरहेका कमिटीबाट एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न र एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न पनि सम्भव छैन । यी कमिटीहरूको कार्यविधि सहमतिको बाटोबाट कार्यसम्पादन गर्ने भन्ने छ । तर यिनले कहिल्यै सहमतिको बाटो समातेनन् । समात्न सफल भएनन् । बरु झमेला सिर्जना गर्ने तत्वहरूको चंगुलमै कमिटीहरू फसिरहे । केही तत्वले समस्या सिर्जना गर्ने र त्यही समस्यामै कमिटीहरू रुमलिने भइरह्यो । त्यो समस्यालाई छिचोलेर अगाडि जान नसक्ने भयो । त्यो विवशताबाट कमिटीलाई मुक्त गर्नका लागि संख्या थप्नुपर्‍यो ।पार्टीले लिएका उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू पूरा गरी उपलब्धि हात पार्ने माध्यम र औजार हुन् । ती पार्टी र आन्दोलनका साधन हुन साध्य होइनन् । पार्टीका निर्धारित साध्य र अभिभाराहरू पूरा गर्न ती सक्षम छैनन् र असफल छन् भने तिनलाई सक्षम र सफल बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसका निम्ति ठोस उपलब्धिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
मौजुदा कमिटीले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा फुट, अनेकता र विभाजन तथा गुटगत क्रियाकलापलाई रोक्न सकेन । खराबी र क्षतितर्फका केही व्यक्तिको यात्रालाई पनि रोक्न सकेन । तिनका प्रयासलाई असफल बनाउन सक्नुपर्थ्यो कमिटीहरूले तर सकेनन् ।सहमतिका साथ एकीकरणका कार्य सम्पन्न गर्दै सहमतिका साथ नै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा त्यो बाटो नै नलिई गुटबन्दी, अस्वस्थता, अनुशासनहीनता र अराजकताको शिकार भएर र फुटको निम्ति औजार हुने वामपन्थी आन्दोलन र नेकपालाई नै गम्भीर नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने, समाप्त पार्न सक्ने खतरा यी कारणहरूले पैदा भयो ।
सरकारले गरेका राम्रा कामसमेतलाई भरसक ओझेलमा पार्ने, बङग्याई टिङ्ग्याई बिरूप पार्ने, विपक्षी र विरोधीलाई समेत उछिनेर झूटा कुरालाई उचाल्ने र सरकारलाई बदनाम गर्ने कार्य संगठित र योजनाबद्ध ढंगले भइरहेकोमा तिनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने र मौजुदा कमिटी ती काम गर्न असमर्थन रह्यो । त्यसले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई पनि निरीह र निराश बनाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । पार्टी नेतृत्वको लगातार अनुचित र निराधार विरोध भइरहने, अनेकौं झूटा, निराधार र घिनलाग्दा आरोपहरुसहित नेतृत्वलाई खुइल्याउने र विस्थापित गर्ने प्रयासहरु भइरहँदा त्यस प्रकारका पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउने र विपक्षीलाई फाइदा पुर्‍याउनेखालका कामलाई मौजुदा कमिटीले रोक्न सकेन ।